Bob Dylan သည်စာပေဆိုင်ရာဆုရရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောဂီတပညာရှင်မဟုတ်ပါ။ | eReaders အားလုံး
Bob Dylan သည်စာပေဆုများရရှိရန်တစ်ခုတည်းသောဂီတပညာရှင်မဟုတ်ပါ
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကစာအုပ်များနှင့်ထုတ်ဝေသူများကမ္ဘာအတွက်စာအုပ်များနှင့်ထုတ်ဝေသူများကမ္ဘာအတွက်အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ များစွာသောမိုရာကေးမီသည်ထူးချွန်သောဆုကိုရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရုံမကအနိုင်ရသူသည်ဂီတပညာရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ Bob Dylan ၏အရွယ်အစား.
ဒါပေမယ့်အဆုံးမှာတော့ဒီအချက်ဟာပုံသဏ္negativeာန်အရအနုတ်လက္ခဏာမဖြစ်ပေမယ့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါ ဂီတပညာရှင်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့စာအုပ်တွေ၊ သီချင်းစာသားတွေအတွက်စာပေဆုတွေရဖို့၊.
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် twitter account တွင် Change.org မှတစ်ဆင့်တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် Yosi Domínguezသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက်စာပေဆုအတွက် Asturias မင်းသားဆုကိုရရှိခဲ့သည်၎င်းသည် Bob Dylan ဆုဖြင့်ဖန်တီးထားသည့်အရှိန်ကိုထင်ဟပ်စေသော၎င်းအသနားခံစာသည် Dylan သည်ဤဆုချီးမြှင့်မှုကိုပထမဆုံးရရှိသည့်ပထမဆုံးဂီတပညာရှင်ဖြစ်သော်လည်းလူတိုင်းအတွက်အထင်အရှားမဖော်ပြနိုင်ပါ။
Los Suaves ၏တေးရေးဆရာသည် Bob Dylan ကိုသွားနိုင်သည်
Yosi Domínguezသည်အဖွဲ့၏တေးရေးဆရာဖြစ်သည် The Suaves ဒီကြီးမားတဲ့စပိန်ဂီတအဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်ခြင်းအပြင် မိမိအသီချင်းစာသားလောကဓာတ်လုံးကိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်ကလေးများမှလူကြီးများအထိဂီတအမျိုးအစားများစွာကိုချစ်မြတ်နိုးသူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏အရေးပါမှုနှင့် Asturias Awards မှမင်းသားအတွက်ဤတောင်းဆိုချက်၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါသီချင်းစာသားအများအပြား Yosi ၏ဒါပေမယ့်လည်းအခြားဂီတသမားများနှင့်ဂီတတေးရေး၏သီချင်းများ, စစ်မှန်တဲ့အနုပညာလက်ရာများဖြစ်ကြောင်းထင်ပေမယ့်လည်းငါ့အာရုံကိုဖမ်းမိ။ ထိုကဲ့သို့သောနိုဘယ်ဆုသို့မဟုတ်အက္ခရာများအတွက်အက်ရ်ှရီးယပ်စ်မင်းသားဆုကဲ့သို့သောဆုသည်ဂီတသမားများ၏လက်ထဲတွင်ရှိသည်။ ယုတ္တိအရှိဆုံးအရာကတော့ဒီလူတွေကိုစာပေဆုတွေမဟုတ်ဘဲဂီတနဲ့ဂီတဆုပေးတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ဟာအနုပညာရှင်တွေလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားလှပေမယ့်ဆုတွေအားလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံထိုက်ပါတယ်။ မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » စာပေ » Bob Dylan သည်စာပေဆုများရရှိရန်တစ်ခုတည်းသောဂီတပညာရှင်မဟုတ်ပါ
Bookeen သည် Cybook Muse Light နှင့် Muse HD တို့ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Amazon သည် Kindle သို့ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းများကိုတားဆီးနိုင်သည်